Baydhabo: Shir lagu heshiisiinayo beelaha Koonfur Galbeed oo furmay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baydhabo: Shir lagu heshiisiinayo beelaha Koonfur Galbeed oo furmay
Mareeg.com: Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa si rasmi ah uga furmay shirweynaha dib-u-heshiisiinta bulshada ku dhaqan koonfur galbeed ee dalka, kaasi oo lagu heshiisiinayo dhamaan bulshada ku dhaqan gobolada Baay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose.
Munaasabaddii furitaanka shirka waxaa ka qeyb galay Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, ergo ka kala socday gobolada Koonfur galbeed ee dalka iyo marti sharaf kale.
Qaar ka mid ah ergada ka qeyb galaysa shirka oo goobta hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay inay aad u soo dhaweynayaan shirweynaha dib-u-heshiisiinta, iyagoo dhankooda balan qaaday inay taageerayaan go’aanada ka soo baxa shirka.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo isna kulanka hadal kooban ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay shirweynahan looga hadlayo dib-u-heshiisiinta, isagoo carabka ku adkeeyay in xukuumadda ay diyaar u tahay fulinta qodobada ka soo baxa shirka.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa goobjoog ka ah shirweynaha dib u heshiisiinta, waxaana la filayaa in berri la gudo galo maamul u sameynta gobolada Baay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose.
Shirkan dib u heshiisiinta ah ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo maalmihii la soo dhaafay howlo dib u heshiisiineed iyo dhex dhexaadin ah ka waday magaalada Baydhabo, iyadoo lagu guuleystay xalinta kala aragti duwaanshiyaha ku saabsan maamulka KMG ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Guud ahaan waxaa la adkeeyay amaanka magaalada Baydhabo iyadoo ay iska kaashanayaan Ciidamada Dowlada iyo AMISOM.
Maamulka Juba: Shirka dib u heshiisiintu dib uma dhacayo
Xulafada ka dhanka ah IS oo maanta ku shiraya France